Iphupha kunye noDildo Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha uMthuthuzeli. Ngethiyori ezindala kunye nezintsha senze esi sikhokelo sokutolika. Sicebisa ukuba uqhubeke nokufunda ukuze ufunde ngakumbi ngalo mbandela.
Idildo yinto yokudlala ngesondo. Kwimeko yayo yakudala kunye nobungakanani, ngokubanzi ifana nepenisi emileyo kwaye isetyenziselwa ukuphulula amalungu esini okanye ukonyusa ukongeza kweqabane xa usabelana ngesondo.
Kwiminyaka yakutshanje, nangona kunjalo, obu bume buye baqhubeka ngakumbi kwaye ii-dildos ngoku ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo, iimilo kunye nemibala. Umqobo wokuthintela ukuthenga nokuthengisa iithoyi zesini nawo wehle kakhulu. Ezi ngoku nazo zithengiswa ngokuthe ngqo kumatheko abizwa ngokuba "ngamaqela e-dildo."
Kodwa kuthetha ntoni xa ubona okanye usebenzisa i-dildo ephupheni? Funda ukutolika kwethu:
1 Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» -ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» - ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha le-dildo eliquka ngokubanzi liqwalaselwa ikakhulu ngumnqweno wokuphupha umbono banokuba yimifanekiso efanelekileyo yesondo okanye yobuhlobo.
Uphawu "oluthuthuzelayo" lwamaphupha lunokubonisa ukuba uyazithemba ukuba uza kuphelisa into ethile. Ungafumanisa ukuba yintoni kanye ngokuhlalutya iimeko ezikhoyo ngoku. Ngapha koko, into efana nendoda "phallus" ifuzisela ephupheni ukukwazi komphuphi ukuba azive ekhululekile yedwa. Awudingi ukuba nabanye abantu ukuze ube sempilweni.
Ngubani obona i-dildo ephupheni uhlala engayifumani ebomini bokwenyani. ukwaneliseka ukuba ufuna. Oku akufuneki ukuba kube kuphela malunga nendawo yesondo. Endaweni yoko, ngasemva kwelo phupha kunokufihlwa kwakhona umnqweno wokwamkelwa ngobungcali.
Njengophawu lwephupha, ipenisi eyenziweyo inokubonisa umnqweno wobuthongo bokucebisa ubomi bakhe ngokwesondo. Okomzuzwana, ukufumanisa kungonelisi okanye kuyadika.
I-dildo enkulu ephupheni ifanekisela umnqweno wento ethile eqatha ukwenza. Ukuba indoda ibona umfazi ephupheni lakhe esebenzisa i-dildo ngelixa ephulula amalungu esini, kuya kufuneka ayazi inkxalabo yakhe enokuthi ithathe indawo ngokulula.
Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, umthuthuzeli unokusetyenziswa njenge Phallussymbol (UPhallus: amakhowa amile okomthondo). Kwelinye icala, ibonwa njengophawu lwamandla ezesondo abaphuphi.
Kwelinye icala, inokuqondwa njengophawu lobukhulu kunye nokuzala. Umntu olalayo kufuneka azi ezi zinto ngokulala kwakhe. Oku kwenza kube lula kuwe ukuba usebenzise ezi zakhono kubomi bakho bemihla ngemihla.
Ngamanye amaxesha "intuthuzelo" isimboli yephupha nayo inokuchazwa njenge iminqweno yesini okanye bonisa iminqweno. Umphuphi akasafuni ukubeka oku ecaleni, kodwa ukukuqonda ebomini bakhe. Nokuba oku kunokwenzeka kuye kuphela ngenani elithile lomdla kuye.
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kukwabona ekusebenziseni komthuthuzeli ephupheni umzamo womphuphi yekezo. Kuba kwinqanaba lamaphupha ungayifezekisa iminqweno yakho yesini ngaphandle kweziphumo ezibi.
Uphawu lwephupha «ukuthuthuzela» -ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, isimboli yephupha "elithuthuzelayo" yenzelwe ukwenza ukuba umphuphi azi ngeminqweno yakhe kwizinto zokomoya el mundo ngokwenene.